Sei Tichipfeka Zvakanaka Pamisangano Yedu?
Pamifananidzo iri mubhuku rino, waona here kuti Zvapupu zvaJehovha zvinopfeka zvakanaka pamisangano yazvo? Sei tichikoshesa nyaya iyi yekupfeka uye kutaridzika zvakanaka?
Tinenge tichiremekedza Mwari wedu. Ichokwadi kuti Mwari haangotarisi kuti tinotaridzika sei nechekunze chete. (1 Samueri 16:7) Asi patinoungana tichinamata, tinoda kuratidza kuti tinoremekedza Mwari uye kuti tinoremekedzawo hama dzedu. Kudai taizonzi tinomira pamberi pemutongi mudare, taizopfeka zvinoratidza kuti tinoremekedza basa rake. Saka mapfekero atinoitawo pamisangano yedu anoratidza kuti tinoremekedza Jehovha Mwari “Mutongi wenyika yese,” uye kuti tinoremekedza nzvimbo yatinomunamatira.—Genesisi 18:25.
Tinenge tichiratidza zvatinotenda. Bhaibheri rinoti vaKristu vanofanira kupfeka “zvinoratidza kuva nemwero uye pfungwa dzakanaka.” (1 Timoti 2:9, 10) Kana tichipfeka ‘zvine mwero’ zvinoreva kuti hatipfeki zvipfeko zvinoita kuti titariswe nevanhu vese, zvekushamisira, zvinoita kuti vanhu vafunge zvebonde, kana zvinosiya muviri pachena. Uyewo kuva ‘nepfungwa dzakanaka’ kunotibatsira kuti tisarudze zvipfeko zvakanaka zvisiri zveuyanga kana zvisina mutsigo. Izvi hazvirevi hazvo kuti hatichabvumidzwi kupfeka zvakasiyana-siyana uye zvatinofarira. Mapfekero edu akanaka anoita kuti “dzidziso yeMuponesi wedu ioneke kunaka kwayo” uyewo anoita kuti ‘Mwari akudzwe.’ (Tito 2:10; 1 Petro 2:12) Saka mapfekero atinoita pamisangano yedu anoita kuti vanhu varemekedze kunamata kwatinoita Jehovha.
Usatadziswa kuuya kumisangano yedu nekufunga kuti uchapfekei kuImba yeUmambo. Hatitarisirwi hedu kupfeka zvipfeko zvinodhura uye zvinoshamisira asi zvinongofanira kunge zvakakodzera, zvakachena uye zviine mutsigo.
Sei tichikoshesa kupfeka uye kutaridzika zvakanaka pamisangano?
Chii chinotibatsira pakusarudza zvipfeko zvedu?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Sei Tichipfeka Zvakanaka Pamisangano Yedu?
jl chidzidzo 8